Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia – Marqaannews
[ March 31, 2020 ] Wasiir katirsan Jarmalka oo isku dilay Cabsi uu ka qabo Coronavirus Darteed!.	Faalloyinka
[ March 31, 2020 ] Degdeg:- Somaliland oo shaacisay laba kiis oo kusaabsan Coronavirus oo laga helay laba magaalo.	Faalloyinka
Alshabaab oo Toogasho ku dilay dad ay ku sheegeen in ay Basaasiin u ahaa Dowladda Somalia.
March 31, 2020 marqaan 0
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegay in ay magaalada Buu’aale ku toogteen lix nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin “basaasiin”. Wararka ay baahiyeen warbaahinta taageerta Al-Shabaab ayaa ku eedeeyey lixda [Read More]
QORMO:- Coronavirus Soomaaliya waa uu uga daran yahay Gaajo!
Shacabka Soomaaliyeed waxa ay kunool yihiin Duruufo kala duwan, waxaana walwal ay dareemeen kolkii Fayruska Corona saddex kiis kamid ah ay Shaacisay Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo saameyn taban ku yeeshay [Read More]
Wasiirka Caafimaadka Soomaliland ayaa Shaaciyay in Laba Qof oo Ku Sugan Magaalooyinka Burco iyo Berbera Laga Helay Caabuqa Coronavirus . Labadan Qof ayaa Kala ah Nin u dhashay Dalka China [Read More]
Wasiir katirsan Jarmalka oo isku dilay Cabsi uu ka qabo Coronavirus Darteed!.
Wasiirka Maaliyada ismaamul goboleedka Hesse ee dalka Jarmalka ayaa is-dilay kadib markii uu si qoto dheer uga murugooday qaabka uu u xalin doono saameynta dhaqaale ee ka dhalatay Xanuunka dilaaga [Read More]
Degdeg:- Somaliland oo shaacisay laba kiis oo kusaabsan Coronavirus oo laga helay laba magaalo.
Somaliland ayaa xaqiijisay Kiisaskii ugu horreeyay ee Cudurka Corona Virus. Wasiirka Caafimaadka Somaliland ayaa sheegay in ka dib markii baaritaano lagu sameeyay dad horay looga shakiyay labo ruux oo ka [Read More]
DFS oo war kasoo saartay muwaadin somaliyeed oo lagu dilay Dalka Koonfur Africa.
Xalay fiidkii Dhexe ayaa waxaa Burcad Koonfur Afrikan ah ay Gudaha dalkaasi ku dileen Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi jirey Yaasiin Maxamed,waxana dilkaasi ka hadashay Safaarada soomaaliya ee dalkaasi. Qoraal [Read More]
QM oo Fariin ku saabsan Corona udirtay Madaxda Doweladda Somalia.
Soomaaliya iyo dalal kale oo badan oo adduunka ah, waxay wajahayaan xilligaan caqabadda aan horay loo arag ee ka dhashay cudurka coronavirus (COVID-19),kaas oo dad badan diley kuwo kalena ay [Read More]
Maxaad kala socotaa Wadamada Africa ee aan wali laga helin cudurka Coronavirus?.
Lix dal oo ka mid ah 54-ka dal ee qaaradda Africa ayaa ku jir liiska dalal yar oo faro ku tiris ah, oo weli aan laga soo werin kiisas la [Read More]
Xiisad dagaal oo balaadhan oo ka taagan deegaano hoostaga magaalada Kismaayo.
Wararka laga helayo gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xiisad dagaal ay ka taagan tahay duleedka galbeed ee magaalada Kismaayo halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalameen maleeshiyo [Read More]
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida qeybta 60aad ayaa Maanta waxaa ay xukuno kala duwan ku ridey Askar lagu eedeeyey dambiyo kala duwan oo ka dhacay deegaannada Maamulka Koonfur Galbeed. Askartaan oo [Read More]
Muwaadin somali ah oo lagu dilay Koonfurafrica xilli dalkaasi uu ku jiro xaalad degdeg ah.
Muwaadin soomaaliyeed ayaa waxaa xalay lagu dilay dalka koofur Afrika, kadib markii kooxo Burcad Koonfur Afrikan ah ay muwaadinkan ku dileen goobtiisa ganacsiga. Muwaadinka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabaa [Read More]
Baadari Ugaandhees oo beeniyay in Africa uu ka jiro Cudurka Coronavirus + Dowladda oo ku dhegan Baadariga.
March 31, 2020 marqaan 1
Dowladda Uganda ayaa ku eedaysay baadari dalkeeda u dhashay inuu dadka taabacsan u sheegay in cudurka safmarka ah ee Covid-19 uusan ka jirin qaaradda Afrika. Dacwad oogayaasha ayaa Augustine Yiga [Read More]
Jubbaland oo wada olole looga hortagayo fatahaad uu sameeyo webiga Jubba ee mara deegaanada maamulkaasi.
Wasaarada beeraha iyo waraabka dawlad goobleedka Jubbaland ayaa deegaanada Buulaguduud iyo Wirkoy ka wadda xiritaanka ilaa 3 goobood oo kamid ah faraha uu wabiga Jubba uga soo fataho beeraha ku [Read More]
SAWIRO:- Hirshabeele iyo Galmudug oo lagu wareejiyay agab loogu talagalay kahortagga Coronavirus.
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada XFS ayaa maanta agab loogu talagalay kahor tagga cudurka Coroanavirus ku wareejisay Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hir-Shabeelle. Deeqdaan waxaa bixiyay Aas-aasaha Shirkadda Alibaba ninka lagu [Read More]
IGAD Awood ma uleedahay in ay si wada jir ah uga hortagto Cudurka Coronavirus?.
Madaxda Ururka Goboleedka IGAD oo ay ku mideysan yihiin Dowladaha Soomaaliya, Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Uganda, Eretareeya, Suudaan iyo Koofurta Suudaan waxa ay ka shireen cabsida fayruska Corona oo saameyn taban [Read More]
Saynisyahanada Cudurka Corona Ayaa Soo saaraya Qofkasta oo Halis Ugu Jira Cudurkani Inuu Yahay Qof Ka Difaaciisa yar Yahay,Iyadoo Cudurada Kalaba Nooc kasta oo Yahiin Ay Ku Imaadaan Wax uun [Read More]
DAAWO VIDEO:Qudbada MD Farmaajo Dhanka Internetka Shirka IGAD Shirarkii Madaxda Dunida Internet loo Badaley.
March 30, 2020 marqaan 0
HADAL-JEEDINTA MADAXWEYNAHA JFS MUDANE MAXAMED CABDULLAAHI FARMAAJO EE SHIR MADAXEEDKA GAARKA AH EE DALALKA IYO DOWLADAHA IGAD EE KU SAABSAN CORONAVIRUS (COVID-19) ISNIIN, 30-KA MAARSO, 2020 Mudane Cabdalla Xamduuk, Ra’iisul [Read More]
DAAWO:- DFS oo amartay in la xiro goobaha diinta lagu barto sida Dugsiyada Quraanka iyo Mowlacyada + Digniin kusaansam qaabka salaada.
Wasiirka Wasaaradda Wasaaradda Awqaafta & Arrimaha Diinta Xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in la xirayo Dugsiyada lagu barto Qur’aanka Kariimka si looga hortago Cudurka COVID 19. Shir [Read More]
DFS oo amartay in la fasaxo dad Muqdisholoogu hayo shaki kusaabsan Cudurka Coronavirus.
Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya ayaa amartey in la siidaayo Afar Ruux oo looga shakisnaa inay qabaan Cudurka Coronavirus,kuwaas oo lagu karantiiley isbitaalka UN/AMISOM ee Muqdisho. Dadkaan la fasaxay ayaa waxaa [Read More]
March 30, 2020 marqaan 1
Dowladda Imaaraatka oo Xaqiijisay in lahelayqof somali ah oo qaba Coronavirus.
Wakaalladda Wararka dalka Imaaraadka Carabta ee WAM waxay baahisay in Muwaadin Somali ah uu ka mid ahaa 63-qof oo Shisheeye ah oo laga helay Covid-19. Tirada Bukaanadda shisheeyaha ee uu [Read More]
SAWIRO:- Madaxwayne Farmaajo oo shir IGAD uga qayb galay Vidio Conference.
Madaxda dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa maanta kulan ka yeeshay cudurka Coronavirus, waxuuna kulankaasi uu ku dhex maray hab muuqaal ah (Vidio Conference) oo ay ku yeesheen aaladda [Read More]
Maxaabiis katirsan Kooxda Daacish oo xoog kaga baxsaday Xabsi aad loo ilaaliyo.
Maxaabiis ka tirsan Maleeshiyadda Daacish ayaa la sheegay in ay gadood ka sameeyeen Xabsi ku yaalla Waqooyi Bari ee dalka Syria, iyagoo u itaal sheegtay Ciiddankii Ilaaladda ka ahaa Xabsigaasi. [Read More]